‘काठमाण्डौ रि’ नामको पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता हुँदै, ३ अर्बको आइपीओ आउने Bizshala -
‘काठमाण्डौ रि’ नामको पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता हुँदै, ३ अर्बको आइपीओ आउने
काठमाण्डौ । पूर्व बैंकर, बैंकर तथा बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेकाहरुको समूहले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी संचालन गर्ने भएको छ ।
‘काठमाण्डौ रिइन्स्योरेन्स कम्पनी’को नामबाट नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी संचालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
यो कम्पनीको छोटकरीको नाम ‘काठमाण्डौ रि’ हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. २० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । जारी पूँजी रु. १० अर्ब हुनेछ भने तत्काल ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजी जुटाइनेछ ।
संस्थापकहरुले ७० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । जसमध्ये ४० प्रतिशत संस्थागत र ३० प्रतिशत लगानी व्यक्तिगत संस्थापकहरुको रहनेछ । ७ अर्ब संस्थापकबाट जुटाइएको छ र कम्पनी संचालनपछि रु. ३ अर्ब बराबरको आइपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना बनाइएको छ ।
kathmandu reinsurance company limited